Funda oko kwahlukanisa la maqela amabini abahlali beTestamente eNtsha.
Njengoko ufunda amabali ahlukeneyo ebomi bukaYesu kwiTestamente Entsha (oko sikudla ngokubabiza ngeeVangeli ), uya kuphawula ngokukhawuleza ukuba abantu abaninzi bachasene nokufundisa kukaYesu kunye nenkonzo yoluntu. Aba bantu badla ngokubhaliweyo kwiZibhalo ngokuthi "iinkokeli zonqulo" okanye "ootitshala bomthetho." Nangona uqala ukumba ubunzulu, kunjalo, ufumanisa ukuba aba titshala bahlulwe ngamaqela amabini amakhulu: abaFarisi nabaSadusi.
Kwakukho ulwahluko oluninzi phakathi kwamaqela amabini. Nangona kunjalo, kuya kufuneka siqale ngokufana kwazo ukuze siqonde ukungafani ngokucacileyo.
Njengoko kuchazwe ngasentla, bobabini abaFarisi nabaSadusi babeyienkokeli zonqulo zamaYuda ngexesha loYesu. Kubalulekile kuba abaninzi abantu abangamaYuda ngelo xesha babakholelwa ukuba iinkonzo zabo zonqulo ziqhubekile kuzo zonke iinkalo zobomi babo. Ngako oko, abaFarisi nabaSadusi ngamnye babenamandla amaninzi kunye nempembelelo ngaphezu kokuphela kobomi bezenkolo zabantu bamaYuda, kodwa iimali zabo, imisebenzi yabo yokuziphatha, ubomi babo bentsapho kunye nokunye.
AbaFarisi nabaSadusi babengababingeleli. Abazange bathathe inxaxheba ekusebenzeni kwangempela kwetempile, ukunikela ngemibingelelo, okanye ukulawulwa kweminye imisebenzi yenkolo. Kunoko, bobabini abaFarisi nabaSadusi "babeziingcali kumthetho" -kuthi, babeziingcali kwiZibhalo zamaYuda (ezaziwa ngokuba yiTestamente eNdala namhlanje).
Enyanisweni, ubuchule bobaFarisi nabaSadusi bahamba ngaphezu kweZibhalo ngokwabo. Kwakhona ziingcali malunga nokuba zithetha ukuthini imigaqo yeTestamente eNdala. Ngokomzekelo, ngelixa iMithetho elishumi yenza ukuba kucace ukuba abantu bakaThixo abafanele basebenze ngeSabatha, abantu baqala ukubuza ukuba oko kwakuthetha ukuthini ukuba "sebenze." Ngaba bekungathobeli umyalelo kaThixo wokuthenga into ngeSabatha - ngaba loo nto yayiyintengiselwano yoshishino, kwaye ngaloo ndlela isebenza?
Ngokufanayo, ngaba kwakunxamnye nomthetho kaThixo wokutyala umyezo ngeSabatha, onokuthi uguqulelwe njengokufama?
Ngenxa yale mibuzo, abaFarisi nabaSadusi bobabili benza umsebenzi wabo wokudala imiyalelo emininzi kunye nemiqathango esekelwe ukutolika kwayo imithetho kaThixo. Le miyalelo eyongezelelweyo kunye nokutolika kudlalwa ngokuba yiyo.
Kakade ke, amaqela amabini awazange avume ukuvuma malunga nendlela iZibhalo kufuneka zichazwe ngayo.
Umehluko omkhulu phakathi kwabaFarisi nabaSadusi yiyabo imibono eyahlukileyo kwizinto ezinqabileyo zonqulo. Ukubeka izinto ngokulula, abaFarisi babekholelwa kwizinto ezingaphezu kwezendalo - iingelosi, iidemon, izulu, isihogo, njalonjalo-ngoxa abaSadusi babengenalo.
Ngaloo ndlela, abaSadusi babephila kakhulu kwizenzo zabo zonqulo. Baliphika ingcamango yokuvuselwa ekungcwabeni emva kokufa (bona uMateyu 22:23). Enyanisweni, bayaphika naluphi na umvo wokuba emva kokufa, oku kuthetha ukuba bayayigatya iimbono zentsikelelo engunaphakade okanye isohlwayo esingunaphakade; Bakholelwa ukuba lobomi bukho konke. AbaSadusi nabo bahlekisa ngcamango yezinto ezingokomoya ezifana neengelosi kunye needemon (bona iZenzo 23: 8).
[Qaphela: nqakraza apha ukuze ufunde kabanzi ngabaSadusi kunye nendima yabo kwiVangeli.]
Ngakolunye uhlangothi, abaFarisi, bebaninzi batyala imali kwiinkonzo zonqulo lwabo. Bathi bathathe iZibhalo zeTestamente Endala ngokoqobo, oko kwakuthetha ukuba babekholelwa kakhulu kwiingelosi nakwezinye izidalwa zomoya, kwaye batyaliswa ngokupheleleyo kwisithembiso sokuphila emva kwabantu abakhethiweyo bakaThixo.
Omnye umda omkhulu phakathi kwabaFarisi kunye nabaSadusi wayengomnye wemeko okanye ukuma. Uninzi lwabaSadusi lwalubukhulu. Bavela kwiintsapho zokuzalwa ezizukileyo ezazisondelelene kakhulu kwiimeko zezopolitiko zemihla yazo. Singazibiza ngokuthi "imali endala" kwisigama sesimanje. Ngenxa yalokhu, abaSadusi babecala ngokuxhomekeke kwiziphathamandla zolawulo phakathi koRhulumente waseRoma. Babenombutho omkhulu wezopolitiko.
AbaFarisi, ngakolunye uhlangothi babedlelane kakhulu nabantu abaqhelekileyo kwinkcubeko yamaYuda.
Bekunjalo abathengisi okanye abanikazi bezentengiselwano abaye baba nobutyebi ngokwaneleyo ukuba baphendule ekufundeni nasekuchazeni iZibhalo- "imali emitsha," ngamanye amagama. Nangona abaSadusi babenamandla amaninzi kwezopolitiko ngenxa yokudibana kwabo neRoma, abaFarisi babe namandla amaninzi ngenxa yefuthe labo phezu kwabantu abaninzi eYerusalem nakwiindawo ezikufutshane.
[Qaphela: nqakraza apha ukuze ufunde kabanzi ngabaFarisi kunye nendima yabo kwiVangeli.]
Nangona kukho ukungafani, bobabini abaFarisi nabaSadusi babekwazi ukudibanisa nomntu abo bobabini babecinga ukuba yingozi: uYesu Kristu. Kwaye bobabini babe negalelo ekusebenzeni amaRoma kunye nabantu ukuba baqhubelele ukufa kukaYesu esiphambanweni .
Iiplani eziyi-8 zeZakhiwo zoLwakhiwo lweNdlu kunye nezoNcedo
I-Spindle Whorls - Isixhobo sasendulo saBakhuthazi
Njani kunye naluphi ixesha lokusebenzisa isiFrentshi iLizwi elibi
Imigaqo yeGalofu - Umthetho wesi-3: I-Stroke Play